Заб 12 CARST - Nnwom 12 NA-TWI | Biblica América Latina
Заб 12 CARST - Nnwom 12 NA-TWI
CARST : Заб 12
1Boa yɛn, Awurade! Ɛnkaa onipa pa baako mpo. Nokwafo nni hɔ bio.
2 Wɔn nyinaa didi wɔn ho atoro. Wɔka nsɛm a ɛyɛ dɛ de sisi wɔn ho wɔn ho.
3 O Awurade, ka tɛkrɛma a ɛdaadaa no nyinaa hyɛ. To ano a etu ne ho a ɛka se,
4 “Yɛnam yɛn nsɛm so nya nea yɛhwehwɛ. Yɛbɛka nea yɛpɛ biara, na obiara rentumi nsiw yɛn ano” no.
5 Nanso, Awurade ka se, “Afei, mɛba efisɛ, wɔrehaw mmɔborɔfo, na wɔn a wɔakyere wɔn no nso repene wɔ wɔn yaw mu. Mɛbɔ wɔn ho ban sɛnea wɔhwehwɛ no.”
6 Awurade bɔhyɛ yɛ nokware. Ɛyɛ kronn sɛ dwetɛ a wɔahoa ho mpɛn ason wɔ fononoo mu. 7 O Awurade, bɔ yɛn ho ban daa, na kora yɛn so fi saa nnebɔneyɛfo no nsam. 8 Efisɛ amumɔyɛfo nenam baabiara, na obiara kamfo wɔn amumɔyɛ no.
NA-TWI : Nnwom 12